Mini ကိုပျံ့, Mini ကိုအနံ့ပျံ့, Mini ကိုရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:mini ကိုပျံ့နှံ့,Mini ကိုအနံ့ပျံ့,Mini ကိုရေနံပျံ့,Mini ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > mini ကိုပျံ့နှံ့
mini ကိုပျံ့နှံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, mini ကိုပျံ့နှံ့, Mini ကိုအနံ့ပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Mini ကိုရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ရနံ့ကုထုံးဆိုင်ရာပျံ့နှံ့မှု 100ml Professional Elegance Nebulizing
အဘယ်သူမျှမရေယိုစိမ့် Mini ကိုအခန်း Ultrasonic ပျံ့နှံ့ USB
Gift Set Mini အိပ်ခန်း Atomizer ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Humidifier
Led Light နှင့်အတူလက်ကား Humidifier Mini ရေပျံ့
Walmart သဘာဝ Lavender ဆီ Mini Diffuser
အမေဇုံ Aroma ရေနံ Cool မြူခိုးပျံ့
အရည်အသွေးမြင့် Mini Aroma Essential Oil Diffuser
သစ်သားအစေ့ Mini ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့
Mini ကို Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့မြည်ပျံ့
Walmart Target Ebay တွင်အသေးစားရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း
သခွားသီးဒီဇိုင်း Mini Moderns လက်ကိုင်ရုံးပျံ့
ခရီးသွားရန် Ultrasonic Humidifier Mini Mist Fogger Diffuser
Amazon မှ Mini Desktop Aroma Diffuser ရောင်းချခြင်း
စားပွဲဝိုင်းရုံး Spa အိမ်ခန်းအတွက် Mini Diffuser
ခရီးသွားခြင်းအတွက် 220ml Humidifier Mini Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအတွက် Ultrasonic Mini ကို Humidifier လေကြောင်းပျံ့
100ML USB ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်အိတ်ဆောင်နူဘိုင်ပျံ့ 【အိတ်ဆောင်အရွယ်အစား】သေးငယ်။ ပေါ့ပါးသည်သင်သွားလေရာရာ၌ယူပါ။ ဒီအိပ်ခန်းငယ်သည်သင်၏အိပ်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ Desktop၊ ကလေးအခန်း၊ ယောဂ၊ ကားနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ L ULTRASONIC HUMIDIFIER...
ရနံ့ကုထုံးဆိုင်ရာပျံ့နှံ့မှု 100ml Professional Elegance Nebulizing ခရီးသွားနေစဉ်သင်၏အိမ်ရေစိုခံစက်ကိုယူဆောင်သွားလိုစိတ်ရှိသလား။ ကောင်းပြီ၊ DITUO personal humidifier သည်အိမ်မှဝေးရာသို့ခရီးထွက်စဉ်သင်နှင့်အတူယူဆောင်ရန်အကောင်းဆုံး air humidifier ပါ! သေးငယ်သော humidifier...
အဘယ်သူမျှမရေယိုစိမ့် Mini ကိုအခန်း Ultrasonic ပျံ့နှံ့ USB လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့သည်ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုတဖြည်းဖြည်းစတင်ကျင့်သုံးလာကြသည်။ ရနံ့ပျံ့နှံ့မှုသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဥပမာ Dituo ရနံ့ကုထုံးစက်များဖြစ်သောရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသည်၊ Shenzhen Dituo ၏ ultrasonic aromatherapy...
80ml 5V Humidifier Mini Led Light Lamp Diffuser စီးပွားရေးလူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့၏ဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ အချို့သောသေးငယ်သောအရာဝတ္ထုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ ရနံ့ကုထုံးစက်များ၊...
Tranquility Mini Electric Desk Usb Aroma Diffuser ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်းနှင့်အတူလူများ၏ဘဝအရည်အသွေးကိုရှာဖွေခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အိပ်စက်ခြင်းသည်ဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုင်းတာရန်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။...
Gift Set Mini အိပ်ခန်း Atomizer ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Humidifier Aroma ပျံ့နှံ့မှုသည်အလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အနားယူစဉ်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ သင်တစ် ဦး အနံ့ diffuser ကိုဝယ်ချင်လျှင်, စျေးကွက်အပေါ်အနံ့ diffusers ၏အမှတ်တံဆိပ်အများအပြားရှိသည်။...
Led Light နှင့်အတူလက်ကား Humidifier Mini ရေပျံ့ ခေတ်မီမြို့ပြဘဝ၏အိမ်မှုအမွှေးအကြိုင်စက်ကိုနေထိုင်ရာနေရာတွင်သာမက၊ ၈၀၉၀ လွန်ကာလများသည်ရိုးရှင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ အလုပ်များသောနေ့များသည်နွေးထွေးသောနံ့သာမျိုးကိုလိုအပ်သည်။ နှလုံး၏ချိုမြိန်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအိမ်၏ရနံ့၊...
Walmart သဘာဝ Lavender ဆီ Mini Diffuser 1. မွှေးကြိုင်သောပျံ့နှံ့မှုသည်ဟိုတယ်များ၊ အိမ်များ၊ ရုံးခန်းများစသဖြင့်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ ၂။ လေထုခြောက်ခြင်းပြtheနာကိုကူညီပါ။ ၃။ မွှေးကြိုင်သောပစ္စည်းပျံ့နှံ့မှုသည်အခန်းအားလေထုကိုစုပ်ယူခြင်း၊ 4. ထုတ်ကုန်များသည်စတိုင်ကျလှပြီးလှပသည်။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၅၈ * ၁၅၈ * ၁၆၀ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 49 * 33 * 34cm / 12pcs
အမေဇုံတွင်အကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှလေအေးပေးစက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးပြီးလေအေးပေးစက်လေဟာအခန်းကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခြောက်သွေ့စေပြီးအရေပြားတင်းမာခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်းစတဲ့လေအေးပေးစက်ရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ။...
အမေဇုံ Aroma ရေနံ Cool မြူခိုးပျံ့ ရနံ့ကုထုံး / စိုထိုင်းဆ / သန့်စင်ခြင်း / ညအလင်းရောင်၊ လုပ်ဆောင်ချက်လေးခု; Ultrasonic အက်တမ်နည်းပညာကိုရေကိုအမှုန်အမွှားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ ကြာရှည်စွာရေစိုစေခြင်း၊ သဘာဝအမွှေးနံ့သာများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလေထုစိုထိုင်းမှုတိုးပွားစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်ရောနှောပါ။...
အရည်အသွေးမြင့် Mini Aroma Essential Oil Diffuser မွှေးပျံ့သောရေဖြန့်စက်သည်ရေမော်လီကျူးများနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုအအေးမိသို့ပြိုကွဲစေပြီးလေထဲတွင်ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည်အာကာသတစ်ခုလုံးကိုအမွှေးနံ့သာများဖြင့်ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီးအခန်းတွင်စိုထိုင်းဆမြင့်မားစေသည်။...
သစ်သားအစေ့ Mini ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ မွှေးကြိုင်သောအနံ့နှင့်လေကောင်းလေသန့်သည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးသာယာသောစိတ်ဓါတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်တွင်အပန်းဖြေမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အသက်နှင့်အလုပ်တွင်မွှေးကြိုင်သောပျံ့နှံ့မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။...
ကလေးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့ မွှေးကြိုင်သောပစ္စည်းပျံ့နှံ့ခြင်းသည်အခန်းတစ်ခုစီအတွက်သီးခြားအမွှေးနံ့သာများပါ ၀ င်သောသာယာသောအနားယူသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ Mini diffuser သည်အရောင်ပြောင်းသော LED light နှင့် ultrasound humidification နည်းပညာဖြင့်အထူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ ultrasound...
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ: မေး။ ။ မှာယူမှုကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲ။ A: သင်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှု၊ အရောင်နှင့်အရေအတွက်ကိုပြောပါ။ ထို့နောက် PI ကိုသင်ရပြီးလျှင်သင့်အမှာစာကိုပေးချေပါမည်။ Q: မည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုသင်လက်ခံပါသလဲ။ A: Paypal၊ Western Union, Money Gram နှင့် T / T တို့ကိုလက်ခံနိုင်သည်။ သင်မည်သူမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။...
သခွားသီးဒီဇိုင်း Mini Moderns လက်ကိုင်ရုံးပျံ့ အားကောင်းတဲ့မြူခိုးမှထွက်။ ဒီသေးငယ်ပျံ့နှံ့အစွမ်းထက်အခိုးအငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအက်တမ်အက်တမ်သည်အဆိပ်များနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုဖျက်သိမ်းရန်အကြိမ်ပေါင်း ၃,၀၀၀,၀၀၀ ဖြင့်လှုပ်သည်။ aromatherapy ပျံ့နှံ့မှု၏အခိုးအငွေ့သည် ၂၅ မှ ၃၅...
ခရီးသွားရန် Ultrasonic Humidifier Mini Mist Fogger Diffuser7Soothing LED Light: ၇ စိုစွတ်စေသောအရောင်များနှင့်အရောင်တစ်ခုစီတွင်အလင်းရောင်ရွေးချယ်စရာ (၂ ခုနှင့်တောက်ပသော) ၂ ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အရောင် ၁၄ ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Ultrasonic နည်းပညာလက်ခံပြီးဖြစ်သောဤ...
Amazon မှ Mini Desktop Aroma Diffuser ရောင်းချခြင်း [Mesmerizing Light Show] ၇ gradient အရောင်ကိုအလိုအလျောက်လှည့်ပါ (သို့) အရောင်တစ်ရောင်တည်းတွင်တပ်ပါ။ သင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်စိတ်အေးအေးဆေးဆေးနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ [စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း]...
စားပွဲဝိုင်းရုံး Spa အိမ်ခန်းအတွက် Mini Diffuser MINI လက်ကိုင်ဒီဇိုင်း။ ဤသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေဖြန့်အသေးစားနှင့်လက်ရာမြောက်သောအရွယ်အစားဝါကြွား။ စာဖတ်၊ အလုပ်လုပ်နေစဉ် (သို့) အိပ်နေစဉ်နေရာသိပ်မယူထားဘဲမည်သည့်စားပွဲပေါ်တွင်မဆိုနေရာအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သေးငယ်သော ultrasonic...
ခရီးသွားခြင်းအတွက် 220ml Humidifier Mini Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ စိတ်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေခြင်း - အေးမြသောမြူခိုးပျံ့မှူမှမြူသည်လေကိုဖြူဖွေး။ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ (စီးကရက်မီးခိုး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနံ့နှင့်ညစ်ပတ်အဝတ်လျှော်ကဲ့သို့) မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့များကိုမြှုပ်နှံနိုင်သည်။...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူသစ်သားအစေ့အိတ်ဆောင် Mini ကိုပျံ့ အလှဆင်ဒီဇိုင်း: Dituo BPA အခမဲ့နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နှံ့မှုသည်တောက်ပသောအလှဆင်စက်ဝိုင်းပါ ၀ င်သည့်အပြင်အိမ်၊ အိပ်ခန်းသို့မဟုတ်ရုံးခန်းများ၏ပရိဘောဂများနှင့်ရောနှောနေသည်။ ၃ x ၁၀ mL သဘာဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ - ၁၀၀% စင်ကြယ်သော Lavender၊...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအတွက် Ultrasonic Mini ကို Humidifier လေကြောင်းပျံ့ ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး aromatherapy ပျံ့နှံ့: အခိုးအငွေ့နှင့်အရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အလင်းကိုရိုးရှင်းသောခလုတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ။ 2-in-1 စိုထိုင်းဆနှင့်ရနံ့ကုထုံး - သင်၏လေထုကိုစိုပြေစေခြင်း၊ အမွှေးနံ့သာများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊...
တရုတ်နိုင်ငံ mini ကိုပျံ့နှံ့ ပေးသွင်း
သင်တို့သည်ငါတို့၏အသစ်ဒီဇိုင်း Ultrasonic Mini ကိုပျံ့နှင့်အတူသွားလေရာရာ၌ရနံ့ကုထုံ၏အချိန်-ဂုဏ်ပြုအစဉ်အလာကိုယူခဲ့! ယင်း၏သစ်ကိုချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ဒီ mini ကိုအနံ့ပျံ့ပြီးပြည့်စုံသောခရီးသွားအဖော်ဖြစ်ပြီးပန်ကြားချက်အရွယ်အစားကိုမဆိုအိမ်, ရုံး, ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားအိတ်တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုများအပြင်စေသည်။
တစ်ဦးကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်အိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်အာကာသဖန်တီးပါ။ LED ကိုအရောင်အလင်းရွေးချယ်စရာသင်သည်သင်၏အလိုရှိသောဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးကူညီနေချိန်တွင်တစ်ဦးကဒဏ်ငွေအေးမြသောအခိုးအငွေ့, လေထုတစ်လျှောက်လုံးအနှစ်သာရခုနှစ်တွင်စင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏မွှေးကြိုင်ဂုဏ်သတ္တိများ realeases ။
ultrasonic လှိုင်းနည်းပညာနှင့်အတူဒီဇိုင်း, အ mini ကိုရေနံပျံ့အိပ်ပျော်နေသောပင်အခါ, မည်သည့် setting ကိုအတွက်သုံးစွဲဖို့ကဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ရေတုန်ခါမှုထက်အပူပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အော်တိုပိတ် Shut - အရေးပါတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး feature ကို, ထိုတင့်ကားအပေါငျးတို့သရေအငွေ့ပြန်ထားပါတယ်တခါ, အ mini ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့အလိုအလျှောက်လည်းမီးလောင်သို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်ပေးဖို့ပိတ်ပါလိမ့်မယ်။